ငါတို့အနိုင်ရ! | Martech Zone
ပြီးခဲ့သည့်သြဂုတ်လကျွန်ုပ်၏အကြောင်းရေးသားခဲ့သည် အလုပ်သစ် at နာယက။ ဒါက Patronpath မှာစိန်ခေါ်မှု ၈ လရှိခဲ့ပေမယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကသူ့ဟာသူထပ်ခါထပ်ခါသက်သေပြနေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမသုံးလပတ်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက်ပိုမိုကြီးမားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ဂဏန်းနှစ်လုံးတိုးတက်မှုရှိကြသည်။
မနေ့ညကငါတို့နိုင်ခဲ့တယ် Mira ဆုများ Indiana ၏သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ Gazelle ကုမ္ပဏီအတွက်!
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအနက်အခက်ခဲဆုံးမှာစားသောက်ဆိုင် POS စနစ်များနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်သည်။ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်နည်းပညာအသစ်များကိုအမြတ်ထုတ်နေသောစုံတွဲတစ်တွဲသာရှိပြီးကျန်အများစုသည် batch ဖိုင်များ၊ Access Databases နှင့် FoxPro တို့၏ကမ္ဘာတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျန်တဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့မတူတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့မူဘောင်တစ်ခုရရှိထားပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ POS ပေါင်းစည်းမှုကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်သည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင်ပါဝင်သလောက်နီးပါးရှိသည်။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုအချိန်ပိုလုပ်ဖို့အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကိုရိုးရှင်းစေတယ်။ Patronpath ၌ကြီးမားသောအသင်းတစ်ခုရရှိထားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဥက္ကand္ဌမာ့ခ်ဂယ်လိုသည်အတွင်းနှင့်အပြင်တွင်ရှိသောလုပ်ငန်းကိုနားလည်သည်။ ချဒ်ဟာနန်ဆန်သည်ကျွန်ုပ်လုပ်ကိုင်ဖူးသမျှအရောင်းရဆုံးအရောင်းစာရေးဖြစ်သည်။ ရောင်းချမှုပြီးဆုံးသွားသောအခါသူသည်သူ၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူသူတို့၏အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့် ကျော်လွန်၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လတ်တလော ၀ န်ထမ်းများမှာ Tammy Heath, Account Manager, နှင့် Marketing မှဒါရိုက်တာ Marty Bird ဖြစ်သည်။
Tammy သည်သူမ၏မန်နေဂျာများကိုဂရုစိုက်သောထူးချွန်သော Account Manager ဖြစ်သည်။ Marty သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များကိုဖွဲ့စည်းပြီးတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးသူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သူကိုယ်တိုင်ကျွန်ုပ်အတွက်အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် Salesforce ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိကိရိယာများ၊ ဂူဂဲလ်အပ်ပလီကေးရှင်းများနှင့် အတိအကျ.
အဆိုပါအသင်းဖြစ်စေ, အဲဒီမှာရပ်တန့်မထားဘူး Kristian Andersen နှင့် Associates မှ တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးပါပြီ ကြောက်မက်ဘွယ်ကို web ရှိနေခြင်းနှင့်အမှတ်တံဆိပ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်နေသောကျွန်ုပ်တို့၏ဘုတ်အဖွဲ့မှဆက်လက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်နေသည် Autobase, HealthX, ပထမ ဦး စွာအင်တာနက်ဘဏ် နှင့် RICS ဆော့ဝဲ.
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်: Patronpath မှ Techpoint MIRA ဆုကိုရရှိသည်
Tags: ဒေသခံစျေးဝယ်ရှာဖွေရေးမီဒီယာမီဒီယာချိုင့်Milomilo ဆွဲယူဆီလီကွန်တောင်ကြားဆီလီကွန်ဗယ်လီ Watcherslideshare လင့်များstartup နင်္ဂနွေပိတ်ရက်
ဒီဂျစ်တယ်ပြမှုဖြင့် ၂၀၀၈ NRA Tech Pavilion မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်
မေလ 17, 2008 မှာ 3: 58 pm တွင်
ဒေါက်ဂလပ်၊ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ POS မှာ အလုပ်လုပ်ဖူးပြီး ဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ သိတဲ့အတွက် ဒီဆုဟာ ကုမ္ပဏီအတွက် ဘယ်လောက်အထိ အဓိပ္ပာယ်ရှိလဲဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်...
မေလ 17, 2008 မှာ 8: 35 pm တွင်
ဝူး-ဟူး! ထူးချွန်ပြီး ထိုက်တန်သောဆု၊ Doug။ NRA မှာ မင်းနဲ့တွေ့တာက Kwingo အဖွဲ့အတွက် မြင့်မားတဲ့အချက်ပါပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှ အချို့သည် မိုက်မဲသောအရာများကို ဖန်တီးကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှ အချို့သည် အသုံးဝင်သောအရာများကို ဖန်တီးကြသည်။ သင်သည် အသုံးဝင်သောအရာများကို ဖန်တီးသည် — သင့်အတွက် ကောင်းမွန်သည်။
မေလ 18, 2008 မှာ 10: 10 AM
ဂုဏ်ယူပါသည်။ မင်းရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဟာ တကယ်ကို အောင်မြင်သွားသလိုပဲ။
မေလ 18, 2008 မှာ 1: 49 pm တွင်
မေလ 18, 2008 မှာ 11: 03 AM
ဂုဏ်ယူပါတယ် Doug! တကယ့်ကို အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုပါ။